John Abraham, Priyanka, Ameesha, Deepika Iyo Xiddigaha Kareena Kapoor Xiliyo Kala Duwan La Dagaashay (+Sawiro) – Filimside.net
John Abraham, Priyanka, Ameesha, Deepika Iyo Xiddigaha Kareena Kapoor Xiliyo Kala Duwan La Dagaashay (+Sawiro)
Kareena Kapoor Khan bilawgii qarnigaan waxay ahed Kangana Ranaut-ka maanta aad u wada jeedaan micnaha waa atirisho aan hadalka la gambanin had iyo jeerna iyo meel walbe joogto si cad u hadasha.
kareena qofkee is dagaal sanyihiin ama ay iska necebtahay qofkaas waxay inta badan ku hesha fursadaha wareysiga oo ay karbaash kula dhacdaa iyadoo hadal qofkaas ka kululaado ku dhahdo.
Waxay xurguf dhexmartay xidigo badan qaar kamid ah ayaan maqaalkan kuxusi doona fadlan hoos kaga bogo Bebo iyo 5-ta jilaa hadda kahor xurgufta dhexmareen inkastoo kuwa kale jiraan balse 5-tan ayaa ugu caansan.
Kareena hada kahor iyadoo ka qeyb qaadaneysa barnaamijka Koffe With Karan waxay weerar ku qaaday murqaaniga Bollywoodka oo aan inta badan jecleen inuu muran dhexda ka galo lama oga waxa uu atoorahan ka haleyay Kareena balse wey iska maagtay sifo uusan ku qancina wey ku tilmaamtay.
Waxay tiri,”John Abraham waa qof aan naxariis leheen qaabkiisa waa shaqsi naxariis aanan aqoonin waji naxariisna leheen mararka qaarna waxaad mooda inuusan aqoonin habka wax loo sheego.”
Bipasha Basu oo John xiligaas saaxiib la ahed hadalkaan ma qancinin mudo ayeena kula colesneed Bebo oraahdaas,
Kareena markale waxay Showga Koffe With Karan ku weerartay atirishada caanka ah Priyanka Chopra taaso dagaalkoda kasoo bilawday filmkii Aitraaz markii Priyanka amaan lixaad leh ku heshay filmkaas Bebo wey ka xumaatay in iyada iyo doorkeda ka saameen badnaato Priyanka.
Hadaba Karan hortiisa waxay Kareena katiri,”Priyanka waa qof aanan aqoonin hadalka iyo lahjada luuqada waxaana layaabanaha halka ay kasoo baratay lahjadan cusub ee aan la fahmi karin.”
Priyanka oo aan iswaalin waxay tiri,”Waxan Kareena u sheega in aan lahjadan kasoo bartay halka saaxiibked Saif Ali Khan kasoo bartay isla meeshaas.”
Bebo hada kahor waxay xitaa gashay Mega Star Salman Khan sanado badan kahor waxay si cad usheegtay in Salman yahay atoore xun,”aniga ma ahi taageere Salman Khan kamana heli Salman sidiisa banaanba waa atoore xun.”
Xaqiiq ahaan Bebo oraahdaas wax badan ayee ka qoomameesay balse Salman waxba uma arkin oo wada shaqeen ayaa dhexmartay waxayna wada sameyeen filmada sida Bodyguard iyo Bajrang Bhaijaan.
Kareena bilawgii qarnigaan waxay ku riyooneysay inee la timaado film gil gila India oo dhan sidaa aawged waxay iska diiday Kaho Na Pyar Hai halka ay Refuge dooratay Refuge oo Abhishek iskula soo caan baxeen guul waacan ayuu gaaray balse Kaho Na Pyar Hai filmkii weyna sanadkii 2000 ayuu noqday Ameesha ayaana ka guul weynatay Bebo.
kareena waxay amaantay shaqada quruxda badan ee Hritik iyo muuqaalkiisa balse Ameesha ayee gashay waaxayna dhahday,”ima cajibin qaab ahaan iyo qurux ahaan muuqalka Ameesha waa qof aanan nuureynin.”
Kareena waxay sameen laheed filmka weyn ee Ram-Leela balse iyadaa iska diiday haba diide maxume maxay Deepika karabtaa waxay tiri hada kahor wareysi mar laga qaadayey sida tan.
“Waan qirsanahay inaan ahay gabar waalan waxaa jiraan xiliyo badan oo aan saxiixday filmo badan kuwaaso aan markii dambena diiday hadana guulo wacan wada gaareen aflaamta waana ka shalaayey anigo nafteyda u sheegay inaan khaldamay.”
“Mid kamid ah aflaamta waa Ram Leela markii Bhansali iiso bandhigay waan iska diiday balse gadaal dambe ayan ka xumaaday wax dhiba malahan Bhansali xiliga dambe ee waqtiga isku keen keeno ayaan la shaqeen doona balse waxaad ogaataan inaan ahay atirishada kaliya ee fursadan oo kale siisa atirishooyinka kale ee guusha u oomaan waana ku faanaa midaas..”
Akhristow dhamaan xidigaha sare kuxusan hader wax dagaal ah kama dhaxeyaan iyaga iyo Kareena dhacdooyinkan oo dhana waa sanado kahor weyna dhamaadeen,….